Displaying items by tag: English speaking faster
သင် အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာနေပြီဆိုရင်တော့ ယခုဖော်ပြပါ အချက်များကို လိုက်နာသင့်ပါတယ်နော်...။
Tuesday, 04 December 2018 16:51
ပြင်သစ်ဘာသာစကား သင်ဖို့ စိတ်ဝင်စားပါသလား....???
Monday, 03 December 2018 11:18
English စာအရည်ချင်း ကောင်းမွန်ခြင်းက ဘွဲ့တစ်ခုနှင့် တန်ဖိုးခြင်းညီသလား???
ဒီမေးခွန်းက အတော်လေးမေးလို့ ကောင်းတဲ့ မေးခွန်းပါ။ အင်္ဂလိပ်စာ ကောင်းမွန်ခြင်းက ဘွဲ့တစ်ခုနဲ့ တန်ဖိုးခြင်း ညီသလားပေါ့လေ။ သိပ်ကို ဖြေရတာ ကြပ်တဲ့မေးခွန်းဆိုလဲ မမှားဘူးဗျ။
ည (၉) နာရီ နောက်ပိုင်းမှာ ဘာတွေလုပ်သင့်လဲ
အောင်မြင်သော ဘ၀တစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ မနက်ခင်းမှာ လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ အရာတွေ အကြောင်းအများကြီး ဖတ်ဖူးပြီးသား ဖြစ်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် ညဖက်မှာရော ဘာတွေလုပ်သင့်လဲဆိုတာ သိပါသလား။ ဟုတ်ပါတယ်။
Wednesday, 28 November 2018 14:12
ကဲ ဘော်ဘော်တို့ရေ အင်္ဂလိပ်စာဘယ်လောက်ပဲလေ့လာလေ့လာ ဘိုလိုအရမ်းကြီး မမှုတ်နိုင်သေးလို့ စိတ်တွေ ဟိုးအောက်ကျဆင်းနေပြီလား။ စိတ်မပူပါနဲ့တော့။